Ahoana no hihazonana fifandraisana salama - Victor Mochere
Fotoana famakiana: 15 mn novakiana
Zavaboary ara-tsosialy ny olombelona. Tsy afaka mivoatra samirery isika – mila ny tsirairay isika mba hamorona, hanorina, hitombo ary hivoatra. Mazava ho azy fa tsy mila "velona" fotsiny intsony ny taranak'olombelona, ​​satria ankoatra ny loza ara-tontolo iainana hafahafa, dia nahafehy ny fahafahana miaina fiainana azo antoka isika. Ny ankamaroantsika dia afaka manangana trano fialofana, manangona rano madio, ary mihinana sakafo avy amin'ny toeram-pambolenantsika. Na izany aza, dia mbola manana ny "ilaina" isika na dia tsy miankina amin'izany intsony aza ny fahasalamantsika ara-batana.
Ny fahasalamantsika ara-tsaina kosa no atahorana. Midika izany fa mila fifandraisana salama sy maharitra isika mba hiroborobo. Rehefa miresaka momba ny fifandraisana isika dia tsy voatery hoe fifandraisana am-pitiavana no tiana holazaina. Mety ahitana ny fianakavianao, ny namanao, ny mpiara-miasa, ny mpiara-mianatra, na ny mpiara-monina aminao izy ireo. Hamorona karazana fifandraisana amin'ny olona rehetra hitanao ianao, na dia ao anatin'ny fotoana fohy ihany aza. Ity faniriana ho anisan'ny fiaraha-monina ity dia tena mahery sy mihetsiketsika, ka afaka mamporisika antsika hijanona amin'ny fifandraisana tsy mahasalama.
Inona no mahasalama ny fifandraisana
Soso-kevitra amin'ny fitazonana fifandraisana salama
Tombontsoa azo avy amin'ny fifandraisana ara-pahasalamana
Saina mena tokony ho fantatra
Ny fifandraisana rehetra dia miavaka, ary tsy misy fomba iray hahatsapana fahafaham-po na fifaliana. Raha lazaina izany, dia misy lamina mahazatra ao amin'ny fifandraisana salama ary matetika izy ireo dia midina amin'ny fanajana, ny fahatakarana ary ny hatsaram-panahy.
1. Fifandraisana misy dikany
Rehefa mandany fotoana miaraka amin'ny olona iray ianao, na namana izany, na olona ao amin'ny fianakaviana, na olon-tianao, dia tokony hahatsapa ho afa-po amin'ny fanatrehany ianao. Io fifandraisana manan-danja io no maha samy hafa ny hoe tiana sy ny fahatsapana ho tiana. Mety ho sarotra ny hamaritana ny fifandraisana misy dikany, saingy raha tsapanao fa manaja anao io olona io, ary mahatonga anao hahatsiaro ho hita, dia nanao izany fifandraisana izany ianao.
2. Fifandraisana misokatra sy feno fanajana
Ara-dalàna ny tsy mitovy hevitra amin’ny olona iray raha manao izany amim-panajana ianao. Ny fanajana dia midika fa tsy mikasa ny hanala baraka ny hafa ianao, na hanilika ny ahiahiny. Rehefa miresaka momba ny tsy fitovian-kevitrao ianao, dia ny mitady marimaritra iraisana sy fifankahazoana. Raha toa ianao sy ny namanao na ny namanao dia manana fifanakalozan-kevitra na adihevitra lehibe izay mitarika amin'ny fifandraisana mahomby, dia mbola mety ho salama ny fifandraisanao. Ny hoe mahatsiaro tena ho azo antoka ianao mba hanehoana fihetseham-po mikorontana tsy misy tahotra ny hamaly faty dia midika fa matoky an'io olon-kafa io ianao mba hahatakatra anao. Na izany aza, raha matahotra ny hiteny ianao ary mahita ny tenanao mamela ny olon-kafa "handresy", dia misy fifandanjana tsy mety amin'ity fifandraisana ity.
3. Ny tombontsoa ivelan'ny roa aminareo
Na dia mety ho nisy fotoana tianao hiarahana isa-minitra aza, raha ny marina dia tsy afaka mahafeno ny filanao rehetra ny olona iray. Tsy mahasalama ny manantena ny olon-tianao ho olon-tianao, namanao akaiky indrindra, olon-tianao, namanao manao fanatanjahan-tena, ary manana tombontsoa mitovy aminao. Ny fananana namana ivelan'ny fifandraisanao dia afaka manampy anao hankafy ny fialam-boly sy ny zavatra hafa mahaliana anao rehefa mampivelatra ny maha-izy anao lavitra ny namanao. Ny fihazonana ny maha-izy anao ho matanjaka dia hamela anao hahatsapa ho feno na dia tsy misy namanao aza, izay lafiny manan-danja amin'ny fifandraisana ara-pahasalamana.
Ho an'ny sasany amintsika dia mora ny mitazona fifandraisana. Saingy ny hafa dia mety mila tanana mamakivaky ny sasany amin'ireo fanamby. Manana toro-hevitra 10 izahay momba ny fomba hitazonana ny fifandraisana salama. Miresaha amin'ilay olona tianao hifandraisana koa. Raha samy eo amin’ny pejy iray ihany ianareo dia hihamatanjaka ny fiarahanareo.
Ny "fanajana" dia iray amin'ireo singa fototra ilaina mba hamoronana sy hitazonana fifandraisana mahasalama. Amin'ny fifandraisana salama dia tokony hahita ireto toetran'ny fanajana ireto ianao:
Privacy sy habaka – Ny fanajana ny tsiambaratelon'ny namanao sy ny fotoana irery dia mampiseho fa matoky azy ianao ary manaja ny filany
Fepetra ara-batana - Raha tsy te hifandray akaiky ny olon-tianao, na milaza aminao fa tsy mahazo aina amin'ny fanaovana zavatra ara-batana izy ireo, ny fahatakarana izany ary ny fanekena ny hisorohana izany dia ambaratongam-panajana tokony hananan'ny fifandraisana am-pitiavana rehetra. Izany dia mampiseho fa azonao ny sisin-taniny
Mandefitra - Ny fahatakarana ny fihetseham-pon'ny namanao sy ny fanirian'ny namanao dia matetika midika hoe fitadiavana marimaritra iraisana. Ny fandeferana amin'ny olana iray dia ahafahanao mahazo aina, ary noho izany dia hajaina
Ny tsy fifanarahana am-panajana - ny fifandraisana am-panajana, na dia mandritra ny fifamaliana aza, dia zava-dehibe amin'ny fifandraisana rehetra. Hita amin’izany fa mahay mihaino tsara ny ahiahin’ilay olon-kafa ianao, ary tsy manao izay hahasosotra azy amin’ny fanehoan-kevitra.
Ny fifanajana dia tokony ho iray amin'ireo andry fototra amin'ny fifandraisanareo. Tsy maninona na inona na inona ny dinamika; na mieritreritra ny namanao ianao, na ray aman-dreny, na iray tampo, na namana, na mpiara-miasa, dia ilaina ny fanajana avy amin'ireo olona voakasik'izany. Matetika, ohatra, ny ray aman-dreny mangataka fanajana amin’ny zanany, nefa tsy mety manome. Rehefa tafiditra ao anatin’io fandrika io izy ireo, dia mahatsiaro ho tsy heno sy tsy voakarakara ilay zaza.
Azo inoana fa hanomboka handainga izy ireo, hisaraka, na hanambany ny ray aman-dreniny mihitsy aza mba hamaly faty. Raha resaka fifandraisana am-pitiavana no resahina, ny rom com dia midika fa ny fihetseham-pon'ny lolo ao an-kibonao no zava-dehibe. Raha ny zava-misy anefa dia ny fahafantarana fa misy olona miandany aminao sy manaja ny filanao no mamela ny fifandraisana hiroborobo.
2. Mihainoa amim-pahavitrihana
Ny fihainoana dia iray amin'ireo fahaiza-manao manan-danja indrindra amin'ny fifandraisana. Izany dia midika mihoatra noho ny fihainoana izay lazain’ny olona iray sy ny fiandrasana ny anjaranao hiresaka; mila mahatakatra sy miombom-pihetseham-po koa ianao. Raha te ho mpihaino mafana ianao, dia mila mandinika ny antsipirian’ny resaka ianao, manome ny sainao manontolo an’ilay olona, ​​tsy miraharaha izay mety ho fitongilanana na fitsarana mety anananao, ary mamaly rehefa mety. Ohatra, rehefa miresaka ny olon-tianao, dia ataovy an-tsaina ny fihetseham-pony sy ny hevi-dehibe resahiny.
Aza manapaka azy, avelao izy hiresaka sy haneho hevitra. Ny fameperana tafiditra amin'ny tsy fanelingelenana no matetika ny ampahany sarotra indrindra, saingy zava-dehibe ny miandry mandra-panontanian'ny mpandahateny ny hevitrao. Rehefa mamaly ianao, dia andramo adika amin'ny teny hafa izay nolazainy taminao, mba hampisehoana fa nihaino ianao. Ny paraphrasing dia rehefa mamerina ny foto-kevitra ianao fa tsy ny teny. Izany dia mampiseho fa azonao amin'ny fomba fijery hafa ilay olana ary mifantoka amin'ny faritra manokana amin'ilay olana ianao. Avy eo rehefa manome torohevitra na fanehoan-kevitrao ianao dia azo inoana fa ho tsara kokoa ny fandraisana azy.
Rehefa miresaka momba ny tsy fitoviana eo amin'ny fifandraisana isika, dia tsy midika izany fa tsy ho eo amin'ny latabatra izany na hoe tsy afaka miova mihitsy ny toetranao. Ny tsy miovaova dia midika hoe mitondra ny hafa amin'ny fomba feno fanajana sy fahatokiana ary fitiavana rehefa mandeha ny fotoana. Ohatra, raha tianao ny mandany fotoana tsara aorian'ny sakafo hariva miaraka amin'ny namanao, dia manantena ny handany fotoana tsara miaraka aminy tsy tapaka izy ireo. Mazava ho azy fa misy andro izay mety ilanao toerana kely, saingy amin'ny ankapobeny dia fantatr'izy ireo fa manantena anao hanao fomba iray ianao. Na izany aza, raha manova ny fihetsikao tsindraindray ianao ary manapa-kevitra ny tsy handany fotoana miaraka amin'izy ireo tsy misy antony, dia mety hanary azy ireo izany ary hahatonga azy ireo hahatsiaro ho tsy milamina.
4. Vondrona fanohanana
Ny vondrona mpanohana dia ahitana namana ivelan'ny fifandraisana iray. Ny fomba fiaina ara-pahasalamana dia tokony ahitana vondrona mpanohana roa farafahakeliny. Amin'ny fananana olona maromaro hiresahana, dia afaka mahazo fomba fijery samihafa momba izay olana sedrainao amin'ny fifandraisanao ianao. Ny vondrona iray dia mety ahitana mpianakavy ary ny iray hafa namana akaiky. Mety ho toa asa mafy ny mitazona ny finamanana mandrafitra ny vondrona mpanohana anao, saingy tsy voatery ho asa mafy izany.
Ny zava-dehibe dia ny fandraisana andraikitra amin'ny fifandraisana. Ny fiarahana misotro kafe amin'ny namanao indray mandeha isam-bolana no hany ilainao mba hihazonana finamanana sarobidy manome fanohanana. Tsarovy fa tsy mila maka torohevitra avy amin'ny olona ao amin'ny vondrona mpanohana ianao, ary tsy voatery handray ny anao koa izy ireo. Ny fihainoana fomba fijery hafa fotsiny dia mety ho ampy hanampy amin'ny famahana olana amin'ny fifandraisana hafa.
Tena ilaina ny fananganana fitokisana raha te hihazona fifandraisana salama ianao. Ny fahatokisana dia mihoatra noho ny finoana fotsiny fa hanao ny “zavatra tsara” ny olona iray; mariky ny halalinina sy fahatakarana eo amin'ny fiarahana izany. Misy ambaratongam-pitokisana samihafa izay manapaka amin'ny karazana fifandraisana samihafa. Ny fifampitokisana fototra dia ny fiarovana ara-batana sy ny fanajana ny fananan'ny tsirairay. Tena ilaina izany mba hampitomboana ny fahatokisana lalindalina kokoa, izay atokisanao ara-pihetseham-po ilay olon-kafa. Ny fahatokisana namana na namana am-pitiavana dia midika fa fantatrao fa miahy ny fahasalamanao ara-pihetseham-po izy ireo.
Izany dia ambonin'ny fiandrasana ny fanoloran-tena amin'ny fifandraisana am-pitiavana manokana. Ny fitazonana ny fahatokisana ara-pihetseham-po amin'ny fifandraisana dia mitaky ezaka tsy tapaka avy amin'ny olona roa. Raha very ny fahatokisanao ny namanao, dia mila mieritreritra ny hanome azy fahafahana hahazo azy indray ianao. Resaho sy saintsaino ny olana natrehinao, ny antony halahelovanao, ary ny zavatra tokony hitranga mba hamerenana ny fitokisana. Izany rehetra izany dia zava-dehibe mba hirosoana sy hanombohana ny fanarenana indray. Mba hihazonana fifandraisana salama dia tsy maintsy miasa amin'ny fahatokisana isan'andro ianao.
6. Mametraha fetra ary ataovy OK amin'ny filazana hoe "Tsia"
Mametraha fetra ary mampahafantatra ny namanao fa ilaina ny mitazona fifandraisana salama. Matetika ny olona no mihevitra fa ny hoe "eny" amin'ny zavatra ilain'ny hafa sy ny zavatra ilainy dia midika fa namana tsara ianao na mpiara-miasa. Mandreraka ny fihetseham-po sy miteraka lonilony anefa ny fanaovana zavatra tsy mety aminao. Mba hitazonana ny fifandraisanao ho sambatra sy ho salama dia mila miteny amin'ny olona eo amin'ny fiainanao ianao rehefa tsy mahazo aina amin'ny zavatra iray.
Ohatra, raha tianao ny mahandro sakafo ho an'ny olon-tianao nefa tsy manantena ny hanao izany isan'andro, dia tokony hahatsapa ho mahazo aina ianao miteny izany. Ny filazana hoe “tsia” dia tsy voatery hidika hoe “tsia”; Ny hany ataonao dia ny mampahafantatra ny namanao na ny namanao hoe aiza no misy anao amin'ilay olana. Ary mba hahatonga ny fifandraisana ho salama dia tokony hanaja ny fetranao ny olon-kafa.
7. Traikefa vaovao
Ny fiarahana manao zava-baovao dia fomba mora hahatonga ny fifandraisana hahafinaritra sy hahafaly. Ny fizarana traikefa vaovao amin'ny olona iray dia fomba tsara hanatsarana ny fifandraisana. Na mankany amin'ny trano fisakafoanana vaovao izany, na mandeha an-tongotra, na mitsambikina avy ao anaty fiaramanidina, na manao fialamboly vaovao, ny fanaovana izany miaraka amin'ny namana na ny namana dia midika fa afaka miara-mandalina ny fihetseham-po iombonana ianao. Ny traikefa vaovao koa dia mitarika amin'ny fanaovana fahatsiarovana maharitra izay miteraka fifamatorana lalina kokoa.
8. Fampiasana media sosialy ara-pahasalamana
Betsaka ny lahatsoratra an-tserasera milaza fa hanimba ny fahafahantsika mifandray ny media sosialy, saingy raha ny marina dia tsy marina izany. Ny media sosialy dia fitaovana mahagaga hifandraisana amin'ny namana sy fianakaviana mipetraka lavitra. Manampy amin'ny fampivelarana vondrom-piarahamonina manodidina ny lohahevitra manokana izay mety ho mitoka-monina. Raha ny fifandraisanao no resahina, dia afaka manampy anao hampivelatra fifamatorana matanjaka kokoa izany rehefa mizara vaovao sy eritreritra eo no ho eo izay mety ho very.
Na izany aza dia misy lafy ratsiny vitsivitsy amin'ny media sosialy izay tokony holazaina. Raha tsy manana fahatokisana matanjaka amin'ny namanao ianao, dia mety hiteraka fialonana ianao rehefa mahita azy mifandray amin'ny hafa, indrindra rehefa ao amin'ny media sosialy. Ny tsy fahampiana iray hafa dia ny fampitahana matetika ataontsika rehefa mijery ireo horonan-tsarimihetsika ataon'ny mpivady hafa ao amin'ny media sosialy.
Mora latsaka ao anatin’ny fandrika mampitaha sy mihevitra fa manana fifandraisana tsara kokoa noho ianao ny hafa. Na dia ny fijerena ny olon-tianao aza dia mety hahatonga anao hampitaha fampitahana. Raha hitanao fa mandeha amin'ity lalana ratsy ity ianao dia famantarana ny fialana amin'ny media sosialy. Tsarovy fa ny fifandraisanao dia eo amin'ny tontolo tena izy.
9. Tanjon'ny fifandraisana tena misy
Mampiasa ny tontolo manodidina antsika isika mba hahatakarana ny fomba tokony hatao sy ny zavatra andrasana. Rehefa miresaka momba ny fifandraisana am-pitiavana, dia matetika isika no mampiasa tele sy sarimihetsika mba hamantarana ny fomba tokony hitondrantsika. Na izany aza dia endrika fialamboly ireo. Mba hampiala voly azy ireo dia mila fifandirana izy ireo, izay midika fa maro amin'ireo fihetsika hitantsika ireo no minia tsy mahasalama. Raha tokony hanaraka ireo fifandraisana mihetsiketsika ireo ianao, dia tokony hifantoka amin'ny tenanao manokana.
Manaova resadresaka am-pahatsorana amin'ny namanao ary anontanio azy ny zavatra antenainy amin'ny fifandraisana. Toy izany koa ho anao, aoka ho azo antoka ny hizara ny hevitrao, mba hananany fahafahana hahatakatra izay tadiavinao sy ilainao. Rehefa mifampiresaka am-pahibemaso ianareo roa, dia ho afaka hifanampy kokoa amin’ireo sakana mety hisakana anareo ianareo. Izany dia mihatra amin'ny karazana tanjona maro, manomboka amin'ny vola ka hatramin'ny fananan-janaka. Mba hahatratrarana ny tanjonao amin'ny fifandraisana dia mila ampidirina amin'ny fahombiazany ny olona roa.
10. Miezaha ho tsara fanahy
Amin'ny ankapobeny, ny torohevitra manan-danja indrindra amin'ny fitazonana fifandraisana salama dia ny tsara fanahy. Ny hatsaram-panahy sy ny fiaraha-miory no fomba tsara indrindra hahafantarana ny manodidina anao. Ny fahafantarana ny mety ho fihetseham-pony amin'ny toe-javatra iray, ary ny faniriana azy ireo ho sambatra no hery manosika ao ambadiky ny fifandraisana mahasalama. Lafiny lehibe amin’ny hatsaram-panahy ny fanajana ny fanirian’ny olona iray.
Rehefa mihaino amim-pahavitrihana ny namanao na ny namanao ianao, dia mampihatra hatsaram-panahy koa ianao amin'ny famelana azy haneho hevitra aminao. Fomba iray hafa hanehoana hatsaram-panahy ny fanaovana ny marina. Na dia mety ho mora kokoa aza ny milaza amin'ny namanao na ny namanao izay antenainy ho re, dia ilaina ny milaza aminy ny marina avy amin'ny toerana misy fiaraha-miory mba hihazonana fifandraisana salama.
Rehefa ao anatin'ny fifandraisana salama ianao dia afaka manantena traikefa mahafinaritra maro.
1. Fiatrehana ny adin-tsaina
Rehefa ao anatin'ny fifandraisana sambatra sy salama ianao dia afaka miatrika adin-tsaina kokoa. Ny fifandraisana anananao amin'ny olona dia mamela anao hahatsapa ho voaro sy ho voaro ao amin'ny tontolo iainanao, ary izany fahatsapana izany dia midika ara-batana. Manomboka mamokatra kortisol kely kokoa ianao noho io fahatsapana fiarovana io. Mazava ho azy fa hanipy voasarimakirana anao ny fiainana, fa ny rafitra fanohanana tsara dia hanampy anao hiady amin'ireo olana ireo. Raha salama ny fifandraisanao, dia tokony hahatsapa ho matanjaka kokoa ianao rehefa miatrika adin-tsaina eo amin'ny fiainana.
Rehefa faly sy tohanana ary afa-po ianao dia avela hifantoka amin'ny tenany ny vatanao. Mahagaga fa ny fikarohana dia mampiseho fa ny olona ao anatin'ny fifandraisana am-pitiavana maharitra dia avo 3 heny noho ny olona tsy manambady. Izany dia satria fantatry ny vatany fa afaka miala sasatra izy ireo rehefa miaraka amin'ny olon-tiany. Raha irery ny marary, tsy misy vondrom-piarahamonina manohana azy, dia tsy maintsy manahy momba ny fahasalamany fotsiny izy ireo.
Ny faktiora sy ny sakafo ary ny fikojakojana ny trano dia zavatra vitsivitsy izay ho lasa ao an-tsain'ny olona tsy tohanana. Miaraka amin'ny olon-kafa hanampy sy hanohana anao, afaka miala sasatra ny vatanao. Toy izany koa ny manodidina anao fotsiny. Ny fahasambarana tsapanao mandritra ny fotoana miaraka amin'ny olon-tianao dia matanjaka ka misy fiantraikany amin'ny hormoninao. Manova ny singa ao amin'ny vatanao izany. Ohatra, mampitombo ny hery fiarovana na mampihena ny tosidra.
Mazava ho azy fa ny tena famantarana fa ao anatin'ny fifandraisana salama ianao dia avy amin'ny habetsahan'ny fahasambarana tsapanao. Ny fifandraisana salama dia faly amin'ny famafazana fihetseham-po ratsy. Rehefa tonga ireo rahona ireo dia tokony ho afaka hiresaka momba ny olana ianao ary ho tonga amin'ny fahatakarana. Misy fahatsapana fampiononana sy fahatoniana azo avy amin'ny fahafantarana fa afaka miresaka mivantana amin'io olona io ianao. Afaka ny ho ny tenanao tanteraka ianao, ary izany no fahasambarana farany.
Na manao ahoana na manao ahoana ny fifandraisanao, dia tokony hahatsiaro ho afa-po sy ho faly ary hahatakatra ianao. Ny fahatsapana tebiteby sy tebiteby rehefa miaraka amin'io olona io dia mety midika fa sahirana ianao. Tahaka ny tsy misy fomba iray ahafahana mifandray tsara, dia tsy misy olana iray afaka manambara ny fisakaizanao na ny fifankatiavanao ho ratsy.
Mba hanampiana anao hivezivezy amin'ity fotoana ity, vakio ny "saina mena". Hazavainay ny dikan'izy ireo, ny fomba hamantarana azy ireo, ary ny soso-kevitra hanitsiana ny fifandraisanareo. Ny fahafantarana ireo olana ireo dia tsy vitan'ny hoe mamerina ny fifandraisana mianjera, fa afaka manampy amin'ny fitazonana ny fifandraisana ara-pahasalamana izay tratran'ny lozam-pifamoivoizana ihany koa.
1. Fitiavana baomba
Ny fanapoahana baomba amin'ny fitiavana dia olana somary vaovao izay miady amin'ny fifandraisana maoderina. Matetika izany dia mitranga amin'ny fifandraisana am-pitiavana vaovao, saingy indraindray ireo famantarana ireo dia tonga aorian'ny ady. Ny fanapoahana baomba fitiavana dia rehefa misy olona iray tena mampiasa vola amin'ny fifandraisanao. Manome firaiketam-po, fifantohana, fanambarana fitiavana, ary zavatra hafa izy ireo mba hahatonga anao hifikitra amin'izy ireo. Misarika anao hiditra sy manome fomba fijery diso momba ny fifandraisanao ianao.
Rehefa miantso ny hafanam-pony ilay mpanao baomba fitiavana, dia tavela ho ratram-po ianao satria misy elanelana lehibe eo amin'ny fitiavanareo roa. Mety hitranga amin'ny fifandraisana platonic, romantika ary fianakaviana izany. Rehefa manontany ny olonao ianao hoe nahoana no niova ny zava-drehetra, dia lasa miaro tena ilay mpanao baomba fitiavana, milaza fa "mifikitra" ianao. Mitohy ny tsingerina rehefa iharan'ny fitondran-tena manevateva ara-pihetseham-po avy amin'ny toetra narsisista ilay voadaroka.
Raha hitanao fa mipoitra ireo fihetsika ireo dia resaho amin'ny namanao na ny namanao momba ny fetra. Angamba tokony holazainao fa tsy mila fanomezam-pahasoavana be dia be ianao vao mahatsapa firaiketam-po, na angamba tianao haka moramora ny fifandraisana. Ny fametrahana an'io haingam-pandeha miadana io dia ahafahanao mahita ilay olona amin'ny maha-izy azy tsy misy fatrany endorphins. Ary izany koa dia mamela ny fitiavana baomba hahatakatra ny fomba tianao hotiavina.
2. Fampitahana tsy tapaka amin'ny media sosialy
Tsy saina mena eo no ho eo ny fidirana amin'ny media sosialy. Ny fifandraisana an-tserasera dia afaka mamorona fifandraisana tsy mampino amin'ny olona izay mety tsy mbola nihaona taminao mihitsy. Misy fetrany anefa izany. Ny fahitana ny ataon'ny olon-kafa amin'ny fotoana rehetra dia mety hanome anao sarin-diso momba ny tontolo manodidina anao. Raha misy olona mandefa tsy tapaka ny sarin'izy ireo any amin'ny gym, tsy midika izany fa miasa isan'andro izy ireo, ary tsy midika izany fa mora ny manao fanazaran-tena. Ny tena zava-dehibe dia mety tsy manaraka lamina mitovy amin'ireo sary ireo koa ny fiainanao.
Ny fotoana malalaka sy ny volanao dia mety tsy hifanaraka amin'ny mpikatroka ara-tsosialy izay ny asany dia ny miasa. Noho izany dia tsy tokony hampitaha ny tenanao amin'ireo sary nalaina an-tserasera ianao. Na izany aza, raha tsikaritrareo fa ny namanao dia mampitaha ny tenany amin'ireo tarehimarika an-tserasera ireo, dia mety ho saina mena izany. Ny olona manana fiheveran-tena ambany dia matetika tafiditra ao anatin'io sokajy io. Mety ho variana amin'ny antsipiriany kely rehetra izy ireo noho ny tsy fahatokisany manokana.
Azonao antenaina fa hiparitaka amin'ny lafiny hafa amin'ny fiainan'izy ireo ny tsy mety, ka miteraka olana eo aminao sy izy ireo. Ohatra, mety hangataka anao hiova akanjo izy ireo, hihena na hanafina ny toetranao, mba hijery tsara kokoa amin'ny Internet. Raha tsikaritrareo fa mitranga izany midina midina izany, dia soso-kevitra ny hiala sasatra amin'ny media sosialy ary hampihatra ny fitiavan-tena. Izany dia mety hidika hoe fifantohana amin'ny ampahany lehibe amin'ny fiainanao sy ny fiainany, mamela ny fanamby atrehina ary mamela fotsiny ny roa aminareo hiaina tsy misy fitsarana.
3. Toa tsy mifankahazo ianareo
Ny tsy fahampian'ny fifandraisana no fomba tsotra indrindra hialana amin'ny fifandraisana. Ny tsy fifankahazoan-kevitra dia mety hampisavoritaka sy handratra fihetseham-po mihitsy aza. Na dia tsy midika aza izany fa olon-dratsy ny namanao, ny namanao, na ny olona ao amin'ny fianakavianao, dia afaka manoro hevitra aho fa manomboka mihamalalaka ny fifandraisanao taloha. Raha ny mahazatra, dia mitranga ny tsy fifankahazoana rehefa manantena ny hafa haneho fitiavana toy izany koa ny olona iray. Mahalana anefa ny olona no mahatsapa fitiavana toy izany.
Mety haneho fitiavana amin’ny fanomezana fanomezana ny olona iray; na izany aza, ny iray hafa dia mety hihevitra fa izany dia “fomba iray hividianana azy ireo”. Ny iray hafa dia mety haneho fitiavana amin'ny fanolorana fanamafisam-peo, fa ny iray kosa mety hihevitra fa “sokajy sy tsinontsinona” izany. Tsy tokony hanantena ny olon-tianao hahalala ny fomba tianao hotiavina ianao. Fa kosa, tokony ho fantatrao izay tianao amin'ny fifandraisana ary hazavao amin'ny namanao, na olon-tianao, na olona ao amin'ny fianakavianao izany. Avy eo dia tokony hanontanianao ilay olon-kafa izay ilainy koa.
4. Fihetseham-po tafahoatra
Raha tsy mahafehy ny fihetseham-pony ny olona iray, dia saina mena goavana izany. Raha ny olana kely indrindra dia mety hahatonga azy ireo ho tezitra mafy, fantatrao ny manalavitra an'io olona io, satria mety haratra ianao. Na izany aza, misy fomba mihoatra ny iray tsy voafehy. Raha misy olona manome anao ny "fitsaboana mangina" fa tsy miresaka aminao momba ny fihetseham-pony, dia mahatsapa ny tsy fahaizany mifehy tena izy. Raha tokony hanidina eny an-tanany izy ireo dia afaka manidy ny zava-drehetra ho sazy ho anao.
Ity dia karazana fanararaotana ara-pihetseham-po. Amin'ireo toe-javatra roa ireo dia tsy misy fiaraha-miory ilay olona. Na tsy mahafantatra ny fihetseham-ponao izy ireo, na mikasa ny handratra azy ireo. Ny hoe miombom-pihetseham-po dia midika mihoatra noho ny fahafantarana ny fihetseham-pon'ny olona iray; momba ny fikarakarana ireo fihetseham-po ireo koa. Ny olona miombom-pihetseham-po dia mbola ho sosotra amin'ny zavatra eo amin'ny fiainany, saingy ho fantany fa manimba ny olona manodidina azy ny kapoka. Noho izany dia maka fotoana kely hipetrahana amin'ny fihetseham-pony izy ireo.
Mianatra mahatakatra ny zavatra tsapany izy ireo ary mitady fomba ara-pahasalamana hamahana ilay olana. Fantatr'izy ireo fa ny kiakiaka sy ny fitabatabana dia miteraka olana bebe kokoa ary mandratra ny olona tiany. Na izany aza, satria misy olona sahirana mifehy ny fihetseham-pony dia tsy midika izany fa tsy tokony ho eo akaikiny intsony ianao. Raha toa ka vonona ny hiova izy ireo, dia afaka mianatra manitsy ny fomba fijeriny sy mahatakatra ny fomba hihemotra rehefa miakatra ny fihetseham-po.
Ny fiaraha-miory dia fahaiza-manao ianarana, ary tsy afaka manantena ianao fa hitovy ny fitaizana na ny tontolo manodidina anao mba hahatakarana ny fomba fampiasana azy. Ny dingana voalohany amin'ny fiaraha-miory dia ny fahatakarana ny hafa. Mety midika izany fa mamaky boky na mijery fandaharana amin'ny fahitalavitra mikendry kolontsaina hafa (boky LGBTQ+, boky mikendry foko samihafa, antokom-pivavahana, sns). Ny fandehanana dia fomba iray hafa hahatakarana izao tontolo izao amin'ny fomba hafa. Ary farany, ny fihainoana amim-pahavitrihana (araka ny voalazanay teo aloha) no fomba tsara indrindra hijerena marina ny fomba fijerin'ny olona iray.
5. Fanazavana entona
Ny fandrenesana entona dia rehefa misy olona manandrana mandresy lahatra olona na vondron'olona hafa fa nanao zavatra (na tsy nanao zavatra) nefa ny mifanohitra amin'izany no marina. Nipoitra voalohany ilay teny rehefa naseho ny lalao Gas Light tamin'ny 1938 (navadika ho sarimihetsika tamin'ny 1944). Amin'ity lalao ity dia manambady vehivavy mpanankarena ny lehilahy iray noho ny hareny. Nafenin’ny fianakaviany ireo firavaka ireo ka nahatezitra azy. Mba hahazoana ny vola, dia nanao fitaovana mekanika ilay rangahy izay hanery ny jiron'ny entona hiredareda.
Nitaraina momba ny jiro mitsilopilopy ny vadiny, nefa holazainy fa mieritreritra zavatra izy. Farany, nandresy lahatra azy izy fa adala. Nalefa tany amin’ny fialokalofana izy, ary noraisin’ny tanany tamin’ny vatosoany. Raha ny tena izy, ny mpamono entona dia hahatonga anao hahatsapa ho toy ny manadino zavatra; manaratsy ny fihetseham-ponao izy ireo ary manao tsinontsinona ny fihetseham-ponao amin'ny fanamaivanana ny toe-javatra. Matetika izy ireo no miantso anao hoe "overdramatic".
Raha mahatsikaritra ny namanao, na ny namanao na ny fianakavianao ianao, dia tokony hifanatrika amin'izy ireo ianao. Mety ilainao ny mampiseho azy ireo porofon'ny zava-misy mba hanaporofoana fa azo itokisana ianao. Ary raha te hanitsy ny fifandraisana ianao dia tokony hanontany azy ny antony nahatsapany fa ilaina ny mandainga. Sahala amin'ny olona tsy teraka mangoraka, matetika tsy afaka manazava ny fihetseham-pony ny mpamono gasy.
Mety ho lehibe tao amin’ny tontolo iray izay heverina ho tsy manan-kery ny filany, ka namolavola io fomba io mba hahazoana izay ilaina. Ny famoronana toerana ho an'ny fifandraisana misokatra sy ny famelana azy ireo haka ny fotoanany hahatsiaro ho voaro dia afaka manampy anao handalo ity olana ity. Na izany aza, tsy tokony hampidi-doza ny fahasalamanao ara-tsaina ianao. Raha toa ka mampahatezitra loatra ny zava-misy, dia tokony hieritreritra ny tenanao ianao ary hatoky tena amin'ny dikan-teninao.
Rehefa dinihina tokoa, ny fihazonana ny fifandraisana salama dia mitaky fanajana sy fifampitokisana ary fifandraisana. Tsy maninona na romantika, platonic, na fianakaviana io fifandraisana io; izy rehetra dia mitaky ireo soatoavina fototra ireo mba hahombiazana. Tsy mora foana ny mitazona fifandraisana salama, na amin'ny fisakaizana izany na amin'ny fanambadiana. Tsy misy famahana haingana ary hisy ny fihemorana fa ny tena zava-dehibe dia ny fiezahana hanatanteraka ny asany. Raha hitanao fa manangana rindrina ianao aorian'ny fifamaliana, dia miverena ary tadidio ny mandray anjara amin'ny fihainoana mavitrika.
Mety ho sarotra ny misintona an'io rindrina io, saingy ny fakana fotoana hihainoana fa tsy hamaly dia mety hanome anao ny fahatakarana bebe kokoa ny olona iray. Tsarovy mandrakariva ny ho tsara fanahy sy hanaja ny tenanao sy ny olon-kafa ao anatin'ny fifandraisana. Rehefa manomboka miharatsy ny toe-javatra, io ambaratongam-panajana fototra io dia hanampy anao hiverina rehefa lasa ny tafio-drivotra. Ireo toro-hevitra ireo dia fitaovanao hitazomana ny fifandraisana ara-pahasalamana, mitadidy azy ireo ary mampihatra azy ireo matetika.